ATN: March 2009
အခုတလော နံမည်ကြီးနေတဲ့ Conficker Worm အကြောင်းကို ကြားဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ မကြားဖူးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်တာပါ။
Software တွေများစွာ အနက်မှာ ကွန်ပြူတာတွေကို ဒုက္ခပေးလေ့ရှိတဲ့ Software တွေလည်း ရှိပါတယ်။ Malware လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲ Malware တွေထဲမှာ Virus, Trojan, Worm, Key Logger, Adware, Spyware စသည်ဖြင့် မျိုးစုံ ပါဝင်ကြ ပါတယ်။ ခုနံမည်ကြီးနေတဲ့ Conficker ကတော့ Worm ပါ။ Worm ဆိုတာ Program တမျိုးဖြစ်ပေမယ့် Virus နဲ့တော့ မတူပါ။
Virus က အသက်ဝင် လာဖို့ တခြား file တခုခု၊ ဒါမှ မဟုတ် program တခုခုကို ချိတ်ဆက် (attach) လုပ်ရပါတယ်။ လုပ်ပြီးတာနဲ့ Virus မိထားတဲ့ file သို့မဟုတ် program ကနေတဆင့် ကွန်ပြူတာကို တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာရဲ့ setting တွေကို ပြောင်းပစ်တာမျိုး (alterring system) ကို လုပ်ပါတယ်။
Worm တွေကတော့ ချိတ်ဆက်ဖို့ file တွေ program တွေ မလိုပါ။ သူတို့ဟာ ကွန်ယက် (Network) တခုကနေ တခုကို ကူးကြပါတယ်။ အဲလိုကူးရင်းနဲ့ အဲကွန်ယက်မှာ ရှိနေသမျှ ကွန်ပြူတာတွေထဲမှာ ခိုအောင်း နေကြပါတယ်။ ဒါပေသည့် Worm တွေက ကွန်ပြူတာရဲ့ setting တွေကို ပြောင်းပစ်တာမျိုး လို သိသာတဲ့ ဘာအပြောင်းအလဲ တခုခုကိုမှ မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့ လုပ်တာကတော့ ကွန်ပြူတာရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို လျှို့ဝှက် ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ Backdoor လို့ ခေါ်တဲ့ တံခါးတွေကို Install လုပ်သွားတာပါ။ အဲလိုနဲ့ ကွန်ယက် တခုမှာ ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာ backdoor တွေ တပ်ပြီးသွားရင် အဲကွန်ယက်နဲ့ ဆက်နေတဲ့ နောက်ထပ် ကွန်ယက် တခုကို ထပ်ပြီး ကူးစက်သွားတာပါပဲ။ သည်လိုနဲ့ backdoor တွေ တပ် ဆင်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ bot-net လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ် ကွန်ယက်ကြီး တခုကို ရပြီ ဆိုတာနဲ့ အဲ Worm ကို ရေးသားတဲ့ Hacker ရဲ့ အမိန့်ကို စောင့်နေကြတော့တာပါပဲ။ Hacker က ဥပမာ spam mail တွေ ပို့ဖို့ command ပေးလိုက်တာနဲ့ အဲ ကွန်ပြူတာ ကွန်ယက်ကြီးက တကမ္ဘာလုံးကို သန်းနဲ့ ချီတဲ့ မေးလ်တွေ ပို့တော့တာပါပဲ။ ဥပမာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ Worm က ချိတ်နေပြီ ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မသိပဲနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက spam mail တွေ deliver လုပ်နေတော့တာပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အဲလိုမျိုး ကွန်ပြူတာတွေပါတဲ့ ကွန်ယက်ကြီးကို Bot-net လို့ ခေါ်ကြတာပါ။
အဲတော့ ခု နံမည် ကြီးနေတဲ့ Conficker Worm က ဘာလုပ်မှာလဲ ဆိုတော့။ ဘယ်သူမှတော့ သေချာ မသိသေးပါဘူး။ ဒါပေသည့် ကျိန်းသေတာတခုကတော့ သည် Worm သာ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ ချိတ်မိနေရင် ကိုယ့် ကွန်ပြူတာကို အဲသည် Worm ရဲ့ ပိုင်ရှင်က ထိန်းချုပ်နိုင်နေမှာပါပဲ။ ကိုယ် ဘာရိုက်ရိုက် key ကို သူက သိနေမှာပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ခန့်မှန်းကြတာကတော့ သည်လိုနည်းနဲ့ သည် Worm ကို သုံးပြီး ဘဏ့် အကောင့်တွေ ပါ့စ်ဒ်ဝါ့ဒ်တွေကို ယူမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သည် Worm ကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ပေါ်လာတာမို့လို့ မျိုးကွဲ (variations) တွေလည်း အများကြီး ရှိတယ် ဆိုကြပါတယ်။ နံမည်ကြီး Anti-virus firm တွေဖြစ်တဲ့ Symentech တို့လို Kaspersky တို့လို ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ထုတ်တဲ့ Anti-malware တွေက ခုထက် ထိတော့ သိပြီးသမျှ Conficker ရဲ့ မျိုးကွဲတွေကို ရှာနိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံး ထွက်လာမဲ့ မျိုးကွဲကိုတော့ အာမမခံနိုင်သေးပါဘူး။
Conficker ရဲ့ creator တွေကတော့ ခုလာမယ့် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှာ တကမ္ဘာလုံးကို တိုက်ခိုက်မယ်လို့ ရာဇသံပေးပြီးသားပါ။ အဲနေ့မှာ တိုင်းဗုံးတလုံးကွဲသလို တိုက်ခိုက်မှာပါ။ ဒါပေသည့် ကွန်ယက်လုံခြုံရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲကြီး အဖြစ် မြင်ရလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ကြောင်းလည်း ပြောထားပါတယ်။ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာကတည်း ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Conficker က ကွန်ပြူတာ အလုံးပေါင်း ၁၀ သန်းကျော်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေအတွင်းမှာ ကုစားခဲ့ရပြီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေသည့် နောက်ဆုံးပေါ် Conficker မျိုးကွဲကိုတော့ မသိရသေးတာမို့ ကွန်ပြူတာ ဘယ်နှလုံးမှာ ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ဖို့ ဘယ်လို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ကိုတော့ ဘယ်သူမှ သေချာ မသိနိုင်ကြောင်းတော့ ပြောပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကြံပေးချက်ကတော့ Conficker Worm ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို မခံရအောင် မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ install လုပ်ထားတဲ့ Windows Operating System ကို Update လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ Anti-virus Software တွေ Install မလုပ်ရသေးရင် Anti-virus Software တခုခုကို Install လုပ်ဖို့၊ Firewall Software တခုခု Install မလုပ်ရသေးရင် လုပ်ဖို့။ အဲတာတွေ လုပ်ပြီးသား ရှိရင်လည်း အဲ Software တွေ အားလုံးကို Update လုပ်ဖို့။ ပြီးရင် ကိုယ့် ကွန်ပြူတာကို Anti-virus Software နဲ့ Full Scan လုပ်ထားဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ၊ စာဖတ်သူတွေလည်း ကိုယ့် Windows ကို Update လုပ်ကြပါ။ Anti-virus နဲ့ Firewall တွေကိုလည်း update လုပ်ကြပါ။ ပြီးရင် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့ မတိုင်မီမှာ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာကို Anti-virus နဲ့ Full System Scan လုပ်ထားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Conficker နဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိပ်ကို သိချင်ရင်တော့ အောက်က လင့် ၂ ခုမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ စာဖတ်သူတွေအားလုံး Conficker ဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
at 9:40 PM 13 comments:
ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တွေ့ ကြုံမှ သိရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်တမ်း တင်တာပါ။ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ ကိုယ်ချင်း စာတတ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြောချင်တာပါ။ ခုတော့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံရတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေကို ပြောပြရင်း သယ်ရင်းတွေကို အသိလေး တခုတော့ ပေးချင်တာပါပဲ။ လောကကြီးမှာ တကယ်တော့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံ မှပဲ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါတယ်... ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကြုံရသေးသရွေ့ကတော့ ၁၀၀ % ကိုယ်ချင်း စာနိုင်မယ် မထင်ပါ... (ဥပမာ.... ကိုယ်တိုင် သူပုန် မဖြစ်ဖူးပဲနဲ့ သူပုန်တွေကို category ခွဲနေ တာတွေကို မြင်ရတော့ ကျနော်က နာမကျန်း ဖြစ်ချင်တယ်...း) အဲလို ပြောဆိုနေတာတွေကို တွေ့ရတာ စိတ် မချမ်း သာဘူး... အဲလို ကျနော် ပြောလိုက်တဲ့ အတွက် လွတ်လပ် စွာရော... မလွတ်လပ် စွာရော သဘောထား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်...း)
ငယ်တုန်းကဆို အဖိုးတွေ အဖွားတွေ ထိုင်ရာကထတဲ့အခါ ချက်ချင်း မထနိုင်ကြတာကို တွေ့ရတာ ခဏခဏပါပဲ။ ထိုင်ရာကနေ ထကြရင်လည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ထကြရတာပါ။ အဖွားဆို - ကျွတ်... ကျွတ်... ကျွတ်... - တောင် အော်နေရသေးတယ်။ ထိုင်နေရာက ထတိုင်း အဖွားကို အဲလို တွေ့နေရတာ စိတ် မချမ်းသာပါဘူး။ အဲတုန်းက ကိုယ်ကလည်း သူငယ်တန်းတက်ကာစ ၅ နှစ်ကျော် ဆိုတော့ အဖွား အဲလို ဖြစ်နေတာကို နားမလည်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ တနေ့သားတော့ - ဖွား ဘာလို့ အဲလို ဖြစ်တာလဲ - မေးမိတော့ - သားရဲ့... အဖွား ဒူးဆစ်တွေ မကောင်းတော့ဘူး... ထိုင်တိုင်း... ထတိုင်း... နာနေတယ်... - အဖွားက ပြန်ပြောပါတယ်။ - သား ဒူးဆစ်တွေကတော့ မနာပါလား အဖွား - ကျနော် က လျှာရှည် ပါသေးတယ်။ - သားက... ကလေးကိုး သားရဲ့... ဒူးဆစ်တွေ ဘယ်နာမလဲ... - အဖွားက ပြောတော့ - ဒါဆို သား ဒူးဆစ်တွေက ဘယ်တော့မှ နာမလဲ... - ကျနော် မေးတော့ - သား.. လူကြီးဖြစ်မှ နာမှာ သားရဲ့... နာကိုနာမှာပဲ... - အဖွားက အဲလို ပြောခဲ့ တာပါပဲ။ ခုတော့ ကျနော့် ဒူးဆစ်တွေ နာနေပြီ။ ထိုင်တိုင်း ထတိုင်း နာတာပါပဲ။ ဒါဆို။ ကျနော်က အသက်ကြီးနေပြီပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ ကျနော်က အသက်ကြီးနေပြီ။ ပစ္စည်း တခုခုကို ယူဖို့ ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်မိရင် ပြန်ထတဲ့အခါ ကျနော် ချက်ချင်း ပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒူးဆစ် ကနေ နာနေတယ်။ မနာ အောင် ဖြည်းဖြည်း ထရတယ်။ ကျနော့် အဖွားလိုပဲ။ သည်လို ဆိုတော့ ခုတော့ ကျနော်က အဖွားပြောသလို လူကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့။ ဘာလို့ဆို - ကျနော့် ဒူးဆစ်တွေက ထိုင်တိုင်း ထတိုင်း နာနေပြီလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွား ထိုင်တိုင်း ထတိုင်းမှာဘာကြောင့် ဖြည်းဖြည်း ထရတယ်... ဘာကြောင့် - ကျွတ်.. ကျွတ်... ကျွတ်... အော်နေရတယ်ဆို တာ ကျနော် သိနေပြီလေ...။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့။ အဲတာ ကျနော့် ကိုယ်တွေ့လေဗျာ...။
at 8:52 PM 32 comments:
ခုတလော ဘာလို့မှန်းမသိ စာရေးရတာ ပျင်းနေတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ ရေးဖို့ စဉ်းစားနေမိတာကတော့ အများကြီး။ ဒါပေသည့် ဘာမှလည်း မရေး ဖြစ်ပါဘူး။ သယ်ရင်းတွေ စာလာဖတ်တဲ့သူတွေကို အားနာတာနဲ့။ သည်ကြားထဲက တပုဒ် ၂ ပုဒ်တော့ ဖြစ်ညှစ်ပြီး ရေးလိုက်သေးတယ်။ စာ မရေးပဲ ခဏလောက် နေဦးမလား စဉ်းစားနေတုန်း တူတော်မောင် မောင်မျိုးက Tag လာပြန်ရော။ သတိတရ Tag တဲ့ အတွက် ၀မ်းသာတယ်၊ အန်ကယ်အောင် ဘလော်ဂို စဖီးယားမှာ ရှိနေသေးကြောင်း သတိရတဲ့ မောင်မျိုးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေသည့် ဘာမှ မရေးချင်တုန်း Tag တဲ့ အတွက်တော့ မောင်မျိုး ခေါင်းကို ဒေါင်ကနဲ နေအောင် တချက်လောက် ခေါက်ချင်တယ်...း) မရေး ပေးရင်လည်း - အန်ကယ်က... ဘာလို့လဲ... မသိဘူး... အခုတလော တူမောင့်ကို... စိမ်းကား နေသလိုပဲ... အဟင့်... အဟင့်... အဟင့်... - ဆိုပြီး လုပ်ဦးမယ် ...း)။ ရေးဖို့ကလည်း ပျင်းနေတယ်။ ခုတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တူမောင်မျိုး အတွက် ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးရမှာက ၀ါသနာဆိုတော့ ရေးစရာတွေက အများကြီးပဲ။ အဲအထဲကမှ အလျဉ်းသင့်ရာ မဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ၀ါသနာတွေကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေနပ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
ငယ်တုန်းက ၀ါသနာတွေထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံးကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ၀ါသနာပါပဲ။ အဲတော့ တွေ့သမျှ စက်ပစ္စည်းတွေကို ဖြုတ်ကြည့်တော့တာပါပဲ။ ငယ်ငယ် တုန်းကဆို လက်ဆောင် ရတဲ့ သံပတ် အရုပ်တွေ၊ သံပတ် ကားတွေဆို အကုန် ဖြုတ်ကြည့်တာပဲ။ ဘယ်လို တည်ဆောက် ထားသလဲပေါ့လေ... ။ လေ့လာတာ... စူးစမ်းတာပါ...း) လေ့လာ စူးစမ်းပြီးတော့ ဘာ အကျိုးအမြတ် တခုမှလည်း မရပါ ဘူးလေ။ အော... အဲတာတွေက အဲလို လုပ်ထား တာကိုး... ဒါက ဒီလို တပ်ထား တာပါလား... ဟိုဟာကတော့ ဟိုလို ကြောင့် လည်နေတာကိုး... ဆိုတဲ့ အသိတွေတော့ ရသွားပါရဲ့... အဲ နောက်တော့ reverse engineering ကို ပြန်ရောက်တာပေါ့လေ။ သံပတ်ရုပ်တွေကို ဖြုတ်တာကတော့ အရမ်း လွယ်တာပေါ့။ ဖြုတ်ပြီးတော့ ပြန်တပ် တာကတော့ အရမ်း ခက်ခဲပါ့။ သူ့ နဂိုရ်အတိုင်း ပြန် ဖြစ်အောင် မတပ် တတ်တော့ဘူး။ အဲတော့ အရမ်း လွယ်တဲ့ အဆင့်ကို လွယ်လွယ် ကူကူ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး အရမ်း ခက်တဲ့ အဆင့်ကိုကျမှ ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ကျော် နေရတဲ့အခါ စိတ်က မရှည်တော့ဘူး... နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးကို အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်ရတော့တာပဲ။ (သည်လိုနဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ ထဲမှာ မင့် အန်ကယ် တယောက် မပါတော့တာ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့တော့ တူမောင်မျိုးရယ်...း)
နောက်တခုက အရွယ်လေးရောက်လာတော့ စန္ဒယားချစ်ဆွေတို့၊ စန္ဒယားလှထွတ်တို့လို စန္ဒယားဆရာ ဖြစ်ချင်တယ်။ အတော့ကို စန္ဒယား တီးချင်လာတယ်။ ဗမာ သံစဉ် သီချင်းတွေကို စန္ဒယားနဲ့ တီးချင်တာ။ ... သူ့ မျက်နှာ... ကျနော့် အသည်း... စွဲနေတယ်... သူသာ ကျနော့် ဘ၀ ... သူသာ ကျနော့်ရဲ့ ကမ္ဘာ... blah blah blah အဲလိုမျိုးပေါ့လေ။ အဲလိုမျိုး စန္ဒယားတီးပြီး ဆိုချင်တာမျိုး။ ဒါမဲ့ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀ကျတော့ စန္ဒယား ဆိုတာမျိုးကြီးကလည်း နေရာတကာ အလွယ် တကူ သယ်သွားလို့ မရ၊ အဲခေတ်ကလည်း စန္ဒယားက တနာရီ ၅၀ ပေးပြီး သင်ရတာဆိုတော့ ပိုက်ဆံက မတတ်နိုင်။ အဲသလိုနဲ့ အဲသည် ၀ါသနာ ကလည်း ထင်သလို မပေါက်ခဲ့ပါဘူးလေ။ သည်လိုနဲ့ ဈေးလည်း သိပ်မကြီး အလွယ်တကူလည်း သယ်သွားလို့ ရတဲ့ တူရိယာမျိုး စဉ်းစားတော့ မယ်ဒလင်တို့ တယောတို့ ဂစ်တာတို့ သွားတွေ့တယ်။ မယ်ဒလင်ကျတော့လည်း မတီးချင်ဘူး။ တယောကျတော့လည်း ဘိုးကြီးနဲ့ ထိုးနေရတာကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဂစ်တာပဲ သင်ဖြစ် သွားတော့ တာပါပဲ။ နောက်ကျမှပဲ စန္ဒယားဆီ ကူးတာပေါ့ ဆိုပြီး သင်လိုက်တာ ခုတော့ ဂစ်တာပဲ တီးဖြစ်နေတော့တယ်။ ခုဆို keyboard တော့လည်း ဟိုနည်းနည်း သည်နည်းနည်း တီးနေတာပါပဲ။ သီချင်းတွေတောင် keyboard နဲ့ တီးနေ သေးတယ်။ ဒါပေသည့် piano နဲ့တော့ မတီးနိုင်သေးဘူးလေ။ စန္ဒယားဆရာကတော့ မဖြစ်တော့ပါဘူးလေ။
သည်လိုနဲ့ စန္ဒယားမတီးနိုင်တော့ တီးနိုင်တာတီးရင်းနဲ့ ဂစ်တာကို အတော်လေး ထဲထဲ ၀င်ဝင် တီးဖြစ် လာတယ်။ နုတ်တွေဘာတွေနဲ့ လေ့လာပြီး တီးဖြစ်လာတာပါပဲ။ ပဲပင်ပေါက် နုတ်ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဂီတ သင်္ကေတတွေကအစ လေ့လာပြီး တီးဖြစ်လာပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ဂီတပိုးက အတော်လေးကို ထိုးကြွလာတော့ အဲခေတ်က နံမည်ကျော် ဂစ်တာ ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ မဇ္ဈိမလှိုင်းက ကိုဇော်မျိုးထွဋ်တို့၊ New Wave က ကိုရေမွန် (ကိုဟန်ငွေထွန်း) ကိုချိုးတီတို့လို ဂစ်တာ ဆရာကြီးတွေ ဖြစ်ချင်လာတယ်။ သည်လိုနဲ့ ပတ်သက်ရာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စတူဒီယို တွေကိုလည်း သွားပေါ့။ အသံသွင်းတာတွေကိုလည်း သွားကြည့်။ နောက်တော့ တရက်သားမှာ လင်းစတူဒီယိုမှာ သားထွေးရဲ့ အချစ်မဲ့တဲ့သဘော အခွေကို အသံသွင်းနေတာ သွားကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုဇော်မျိုးထွဋ်ကြီးတီးနေတာကိုသေသေချာချာ အနီးကပ် မြင်ခဲ့ရတော့ ကိုယ့်လက်နဲ့များ ဆီနဲ့ရေပဲ။ သည်ကြားထဲ ဂစ်တာတီးတဲ့အခါ သုံးတဲ့ effects တွေ Amp တွေ နောက်တခြား နားလည်စရာ စက်ပစ္စည်းတွေကလည်း အတော်များတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကိုယ့် အနေအထားနဲ့ဆို သည်လို စက်ပစ္စည်းတွေ ကိုင်တွယ်နားလည်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကလည်း အတော် နည်းတော့ စိတ်ဓါတ်လည်း ကျသွားတယ် ထင်တာပဲလေ။ ဂစ်တာဆရာ ဖြစ်ချင် စိတ်လည်း သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ အပျင်းပြေပဲ တီးတော့တယ်။ သည်လိုနဲ့ ဂစ်တာ ဆရာ တယောကလ်လည်း မဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။
(ကဲ... ဘလော်ဂိုစဖီးယားထဲက အန်ကယ့် ဖေးဗရစ် တူကြီးရေ့ ရေးပေးလိုက်ပြီ.. အဟင့်.. အဟင့်... တော့ ထပ် မလုပ်နဲ့တော့...း)
at 1:08 AM 20 comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်က ရေးခဲ့တဲ့ လမ်းဆုံးရောက်သွားသူများကို ဆက်ရေးဖို့ဟာ ဘာလို့မှန်း မသိ စာရေးရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာပါ။ ခုတော့ ဆက်ရေးလိုက်ပါတယ်။
၈၈ အရေး တော်ပုံကြီး အပြီးမှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဘ၀ထဲ ရောက်လာခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေ ထဲမှာ ကျနော်လည်း တယောက် အပါအ၀င်ပါ။ ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံ ခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ သေ့ဘောဘိုးစခန်းကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။ မြို့တွေပေါ်ကနေ တောထဲကို ရောက်လာတဲ့ လူငယ်တွေ အားလုံး ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ ကြရတဲ့ ရန်သူ ကတော့ ငှက်ဖျားပါပဲ။ သည်ရန်သူနဲ့ ကတော့ နေ့တိုင်း တိုက်နေကြရတာပါ။ ဘူမိဗေဒမှာ ငှက်ဖျား ဧရိယာတွေကို ကွင်းဆင်း ခဲ့ဖူးတော့ ကျနော်က ငှက်ဖျားနဲ့တော့ အထိ အတွေ့ရှိနေပြီးပါပြီ။ သည်တော့ တောထဲ မ၀င်ခင်မှာကို ရန်ကုန်က ထွက်ကတည်းက ငှက်ဖျား ဆေးတွေ ကြိုတင်ပြီး သောက်လာ တာပါ။ တောထဲ ရောက်တော့လည်း ကာကွယ် ဆေးတွေကို အပတ်စဉ် ပုံမှန် သောက်တာပါပဲ။ သည်ကြားထဲ ကကို ၃ လ ကျော်တဲ့ အခါမှာ ငှက်ဖျား စဖြစ်တာပါပဲ။ စခန်းမှာ ငှက်ဖျား မဖြစ်တဲ့သူဆိုတာ တယောက်မှ မရှိပါ။ ပြင်းထန်တာ မပြင်းထန်တာပဲ ကွာကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ စခန်းဘေးမှာ ဖြတ်စီး သွားတဲ့ ချောင်းကလေး တချောင်းရှိပါတယ်။ ကရင်လို မဲကလ ချောင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် ဘာသာ ပြန်ထားတယ် - မင်္ဂလာ ချောင်းပေါ့။ တရက် မှာတော့ အဲ မင်္ဂလာ ချောင်းမှာပဲ ကျနော်တို့ ရင်း (၂၀၄)က ရဲဘော် တယောက် လမ်းဆုံးကို ရောက်သွား ပါတယ်။ စခန်းမှာ ရေချိုးဆိပ်က ၂ ခု ရှိပါတယ်။ တခုကတော့ စခန်းရဲ့ မိန်းဂိတ်ကနေ ဆင်းသွားတဲ့ ရေချိုးဆိပ်နဲ့ နောက်တခုကတော့ ဆေးရုံ ရှိတဲ့ နေရာကနေ ဆင်းတဲ့ ရေချိုးဆိပ်ပါ။ နွေရောက်လာတော့ ချောင်းရေက နဂိုရ် ရှိတာထက် ကျသွားပါတယ်။ သည်တော့ ဆေးရုံကနေ ဆင်းတဲ့ ရေချိုးဆိပ်မှာ ရေတိမ်လွန်း အားကြီးလို့ ဘယ်သူမှ ရေမချိုးကြတော့ပါ။ မိန်းဂိတ်က ရေချိုးဆိပ်မှာပဲ ချိုးကြပါတယ်။ ဒါပေသည့် ဆေးရုံမှာ ငှက်ဖျားနဲ့ ဆေးရုံတက်နေကြရတဲ့ ရဲဘော်တွေကတော့ မနက်ဖက် ဆိုရင် မျက်နှာ သစ်တဲ့ အခါ ဖျားနာထားလို့ အားနည်း နေတာနဲ့ ဝေးဝေး လံလံ မသွားနိုင်တော့ အနီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဆေးရုံက ရေချိုးဆိပ် မှာပဲ မျက်နှာသစ် ကြတာ များပါတယ်။ ငှက်ဖျားဖြစ်ထားတဲ့သူတွေဟာ အချိန် မရွေးလည်း တက်တတ် သတိလစ်တတ် ကြတာပါပဲ။ (Pass-out ဖြစ်တာပေါ့) တနေ့တော့ ကျနော်တို့ ရင်း (၂၀၄)က ရဲဘော် တယောက်ဟာ ဆေးရုံ ရေဆိပ်မှာ မျက်နှာ ဆင်းသစ်တုန်း ငှက်ဖျား တက်ရင်း မူးလဲသွားတာပါ။ တတောင် မပြည့်တဲ့ ရေထဲမှာ ခေါင်းစိုက်ပြီး မူးလဲသွားတဲ့ ရဲဘော်ဟာ ရေတိမ်ထဲမှာ အသက်ပါ ပါသွားတာ ပါပဲ။ ရေတိမ် နစ်တယ် ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ။ သူ တယောက်တည်း မနက် အစောကြီး ရေချိုးဆိပ်ကို ဆင်းတာ ဆိုတော့ အနီးအနား မှာလည်း ဘယ်သူမှ မရှိကြပါဘူး။ သူ့ကို ဆေးရုံမှာ မတွေ့လို့ လိုက်ရှာကြတော့မှ ချောင်းထဲမှာ တွေ့ပါတယ်။ တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ အသက် မရှိတော့ပါဘူး။ သည်လိုနဲ့ သူဟာ ကျနော်တို့ စခန်းရဲ့ ပထမဆုံး မြေမြုပ်ရတဲ့ ရဲဘော် တယောက် ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဗမာ တပြည်လုံး ပြည်သူ လူထုတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် သူ ကိုယ်တိုင် အားထုတ်ရင်း ရေတိမ်မှာ သူနစ်ခဲ့ရတာပါ။ ကျနော် အမှတ် မမှားခဲ့ဖူး ဆိုရင် မှတ်မိနေတာကတော့ သူ့ နံမည်က ရဲဘော် မောင်ကြီးပါ။
သူ့လိုပဲ နောက်ထပ် အသက် မဆုံးသင့်ပဲ ငှက်ဖျားကြောင့် ဆုံးရတဲ့ ရဲဘော် တယောက် ရှိပါသေးတယ်။ ကျနော် တို့တွေ တောထဲမှာ စခန်း ဆောက်ကြတော့ တပ်ရင်းနဲ့ တပ်ခွဲတွေ အလိုက် ဘားတိုက်တွေ ဆောက်ကြရ ပါတယ်။ ဘားတိုက်တွေရဲ့ ကြမ်းခင်းကတော့ သစ်စက်တွေက လွှင့်ပစ်တဲ့ ပကာတွေပေါ့။ သစ်ခွဲ စက်တွေက ပကာတွေကလည်း အတို အရှည်တွေ မညီပါဘူး။ ဘားတိုက်တွေမှာ အလယ်က လူသွားလမ်း လုပ်ပြီး ဟိုဖက်သည်ဖက် ကြမ်းခင်း ၂ ခု လုပ်တဲ့အခါ ဘားတိုက်ရဲ့ နံရံ အပြင်ဘက်ကို ပကာတွေက ပိုထွက် နေပါတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်သူကမှလည်း ညီသွားအောင် ပြန်ပြီး ဖြတ်မနေကြ တော့ပါဘူး။ သည်အတိုင်းပဲ ထားလိုက် ကြပါတယ်။ ဘားတိုက် ဘေးမှာ သည်အတိုင်းပဲ အစွန်းထွက်နေတဲ့ ပကာတွေ အပေါ်မှာ ပစ္စည်းတွေလည်း တင်ရင် တင်ထားတတ်ကြပါသေးတယ်။ တချို့နေရာတွေကတော့ အစွန်း ထွက်နေ တာက တတောင် ကျော်ကျော် လောက်ထိ ရှည်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ တခါတခါ လူတွေ တက်အိပ် တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မနက်ပိုင်း နေပူတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လေ။ တရက်မတော့ ရင်း (၂၀၄) ခွဲ(၂)က ငှက်ဖျား ဖြစ်နေတဲ့ ရဲဘော်တယောက်ဟာ ဆေးရုံကနေ လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ခွဲ (၂)က ဘားတိုက်မှာ အဲပကာ အစွန်းထွက်တွေပေါ်မှာ အိပ်ရင်းနဲ့ နေပူစာ လှုံနေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲသည်အချိန်က ကျနော်တို့ စခန်း တခုလုံးဟာ စစ်သင်တန်း တက်နေကြတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စခန်းမှာက ဆေးမှူးတချို့၊ ကော်မတီဝင် တချို့နဲ့ ဖျားနာနေတဲ့ ဂီလာနတွေပဲ ကျန်နေခဲ့တာပါ။ အားလုံးက စစ်သင်တန်းပြီးတဲ့ ညနေကြမှ ကိုယ့်ဘားတိုက်ကို ကိုယ်ပြန်ရောက်ကြတာပါ။ သည်လိုနဲ့ ညနေစောင်းတော့ ဆေးရုံမှာ သည်ရဲဘော် ပျောက်နေတယ် ဆိုတာ သိသွားတော့ ရှာကြရတာပါ။ ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့ဘူး။ နောက်ဆုံးကျမှ သူ့ခွဲ (၂) ဘားတိုက်ရဲ့ ပကာအစွန်းတွေပေါ်မှာ လဲလျောင်းလျက်သား အသက် ပျောက်နေတဲ့ သူ့ကို သွားတွေ့ ကြရတာပါ။ ကြည့်ရတာ အိပ်ပျော်နေတုန်း (pass-out) ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ အနားမှာ တယောက်ယောက် ရှိရင်တော့ အသက် မသေနိုင်ပါဘူး။ သူကတော့ ဒုတိယမြောက် ငှက်ဖျားနဲ့ သေဆုံးရတဲ့ ရဲဘော်ပါ။ ကျနော် မှတ်မိ သလောက် ကတော့ သူ့နံမည်က ရဲဘော် စိန်ဝင်းပါ။
ငှက်ဖျားနဲ့ တတိယမြောက် ဆုံးတဲ့ ရဲဘော်ကတော့ ရဲဘော်တင်ရွှေပါ။ စခန်းမှာ ငှက်ဖျားဖြစ်၊ အခြေအနေ ဆိုး လာတော့ မဲဆောက်ပို့၊ သည်ကြားထဲက မဲဆောက်ဆေးရုံမှာ ကုနေရင်းက ကျန်တဲ့ ရောဂါတွေပါ ၀င်လာပြီး ဆုံးတာပါ။ သူဆုံးတော့ စခန်း ကော်မီတီက ထောက်ပံရေး တာဝန်ခံ ကိုမြင့်စိုး၊ ရုံးအဖွဲ့မှူး ကိုတင်နွယ်နဲ့ ကျနော် အလောင်းကို ဆေးရုံက သွားထုတ်ပြီး ဈာပနအတွက် ရေမိုးချိုး ပြင်ဆင်ပေးရတာပါ။ ကျနော့် အတွက် တော့ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အလောင်းပြင်ခဲ့ဖူးတာပါ။ ပြီးတော့ မဲဆောက် သင်္ချိုင်းမှာ မီး သင်္ဂြိုဟ် ခဲ့ရ တာပါ။ သူဆုံးပြီ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ၃ ယောက် ဆေးရုံကို သွားပြီး အလောင်း ထုတ်ရပါတယ်။ ရေခဲ သေတ္တာ အကြီးကြီးလို ဖြစ်နေတဲ့ ရေခဲတိုက် ထဲမှာ အပေါ်ထပ်မှာ သူ့ အလောင်းကို ထည့်ထားတာပါ။ ကျနော်တို့က စတီးလ်ဘန်းပေါ်တင်ထားတဲ့ သူ့အလောင်းကို အဲ ရေခဲသေတ္တာထဲကနေ ဆွဲထုတ်ပြီး အသုဘ ပြင်တဲ့ ကျောက်ကုတင်ပေါ်ကို တင်ရပါတယ်။ အသားတွေက၀ါပြီး ဖောသွပ်နေတဲ့ သူ့အလောင်းက လံကွတ်တီ လေးတခုကလွဲပြီး ဘာအ၀တ်အစားမှ မရှိပါ။ သူ့အလောင်းကို ကျနော်တို့ ၃ ယောက် ခြေနဲ့ လက်က ကိုင်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကို တင်ရပါတယ်။ ရေချိုးပေးပြီး အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပေးရပါတယ်။ အဲသည်လို လုပ်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ သူ့ အသား တွေက ညိုမည်း ပြာနှမ်းလာတာပါပဲ။ နောက်တော့ အခေါင်းထဲ ထည့်ပြီး ကားနဲ့ သင်္ချိုင်းကို သယ်ရတာပေါ့လေ။ အဲမှာတော့ မီးသင်္ဂြိုဟ်တာပါ။ အသုဘ အခမ်း အနားပြီးတော့ ကျနော်တို့ ၃ ယောက်လုံးကို အားလုံးက ပြောတာပါပဲ - ပုပ်စော်နံနေတယ်- တဲ့။ ကျနော် တို့ကတော့ ဘယ်သိမလဲလေ။ ရေခဲတိုက်ကလည်း လူသေတွေ အများကြီး မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ စခန်း မပြန်ခင် မဲဆောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းနားက စားသောက်ဆိုင်မှာ ညနေစာ စားရင်း ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ် နမ်းကြည့်တော့ - ဟုတ်ပါ့ - အနံ့တွေ နံနေတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ရဲဘော်တင်ရွှေကို ရေချိုးပေးတုန်းက သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေဟာ အဲသည် အေးစက်စက် အထိအတွေ့ကြီးကို တောက်လျှောက် ရနေတော့တာပါပဲ။
သည်ရဲဘော် ၃ ယောက်လုံးရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက ၁၉၈၈နဲ့ ၈၉ အစပ်မှာပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကပါ။ ဒါပေသည့် ကျနော့် အတွက်တော့ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ။ သည်ရဲဘော် ၃ ယောက်လုံးဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို မကြိုက်ဘူး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကြိုက်တယ်၊ ဗမာပြည်က ပြည်သူ လူထုအတွက် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး တိုက်ပွဲမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကို ယုံကြည်လို့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ ရှိရာကို လိုက်လာခဲ့သူတွေပါ။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ ရှိရာ နယ်မြေမှာ ရှိတဲ့ ငှက်ဖျားနဲ့ ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ရင်း သူတို့ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။ ABSDF ရဲ့ မှတ်တမ်းထဲ မှာတော့ သူတို့ဟာ သေဆုံး သွားသူတွေပါ။ ကျဆုံးသွားသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ They are not KIAs (Killed-in-action). ဒါပေသည့် ကျနော့် တဦးတည်းရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ သည်ရဲဘော် ၃ ယောက်ဟာ (သို့မဟုတ်) သည် သူရဲကောင်း ၃ ယောက်ဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားသူတွေပါ။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ကျဆုံးသွားရတဲ့ သူရဲကောင်း ရဲဘော်တွေ အဖြစ် ကျနော် မှတ်တမ်းတင် လိုက်ပါတယ်။
ဟိုးတလောက မောင်တိန် ဘလော့ကို သွားလည်ရင်း သူ့ရဲ့ လမ်းဆုံးဆိုတဲ့ ပို့စ် တခုကို ဖတ်ရတော့ အဲသည်တုန်းက ကိုယ့်စိတ်ထဲ ထင်မြင်တာလေး တခုကို ကွန်မန့်ထဲ ရေးခဲ့မိတယ်။ ခုတလောလည်း ဘာရယ်လို့တော့ မဟုတ် အဲသည် လမ်းဆုံး ဆိုတာကို စဉ်းစားနေမိတယ်။ စဉ်းစားမိရင်းနဲ့ ကျနော် ကြုံခဲ့ရတဲ့ လမ်းဆုံး ရောက်သွားခဲ့တဲ့သူတွေ အကြောင်းကို ပြန်ပြီး ပြောချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်။
လူမှန်းသိတဲ့ အချိန်ကစပြီး မှတ်မှတ်ရရ သေဆုံးခြင်းဆိုတာကို ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာ ကတော့ ကျနော် ၃ နှစ်သား လောက်ကပါ။ အဖွားတို့ ဘေးအိမ်က လှလှစီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တယောက်က ကျနော်ရဲ့ ကစားဖော်ပေါ့။ ကျနော်တို့က ကျောင်း မတက်ရသေးတဲ့ ကလေးတွေ ဆိုတော့ နေ့လည် နေ့ခင်းဆို ဟိုဖက်အိမ် သည်ဖက်အိမ် ကူးပြီး အတူဆော့နေကြ။ တနေ့ တော့ သူတို့ အိမ်ကို ဆော့ဖို့ ကျနော် ကူးသွားတော့ လှလှစီက - အဖိုး သေ သွားပြီဟ - တဲ့။ သူ့အဖိုးက ဟိန္ဒူ အမျိုးသားကြီးပါ။ ကျနော်တို့က မူစိန်ကြီးလို့ ခေါ်ကြတယ်။ -သေသွားပြီ- ဆိုတဲ့ သူ့စကားကို ကျနော် နားမလည်ပါဘူး။ -ဘာလဲဟ - ကျနော်မေးတော့ - လာ ငါပြမယ် - သူက ပြောရင်း ကျနော့်ကို သူတို့ အိမ်နောက်က နွားတင်းကုပ်ထဲကို ခေါ်သွားပါတယ်။ မူစိန်ကြီးက နွားတွေ မွေးထားတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ နွားနို့လည်း လိုက်ရောင်းပါတယ်။ သူ ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ နွားတွေနဲ့ အတူ အဲမှာပဲ ကုတင် တလုံးနဲ့ အိပ်တာပါ။ တင်းကုပ်ထဲ ရောက်တော့ - အဲမှာ ကြည့် - လှလှစီက ပြောတော့ ကုတင် ပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့ မူစိန်ကြီးကို တွေ့ပါတယ်။ (ကျနော်က အိပ်နေတယ် ထင်တာပါ)။ - မူစိန်ကြီး - ခေါ်ရင်းနဲ့ ကျနော်က အ၀တ်ဖြူ အောက်က ထွက်နေတဲ့ သူ့ခြေထောက် ၀ါဝါကြီးကို ကိုင်လှုပ် ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အေးစက်နေတဲ့ ခြေထောက်ကြီးကို ကိုင်မိတော့ - အား - အေးစက်နေတာပဲ - ကျနော် ပြောမိတော့ - သေပြီလေဟာ နင်ခေါ်လို့ မရတော့ဘူး - လှလှစီက ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ - သြော... သေတော့ ခေါ်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့ - အဲလိုပဲ ကျနော် တွေးမိတာပါ။ အဲသည်နေ့က ကျနော်တို့ မကစားရပါဘူး။ ကျနော် လည်း အိမ်ဖက် ပြန်ကူး လာပြီး။ အဖွားကို - အဖွား မူစိန်ကြီး သေသွားပြီ - ပြောတော့ - ဟုတ်တယ်သား.. မူစိန်ကြီးက ညကတည်းက ဆုံးသွားတာ - ပြောပါတယ်။ - ဆုံးတာက ဘာလဲ အဖွား - ကျနော်က လေရှည်ပြန်ပါတယ်။ - သေတာကို ပြောတာလေ - အဖွားက ပြန်ပြောပါတယ်။ - ဘာလို့ သေတာလဲ အဖွား - ကျနော် မေးတော့ - မူစိန်ကြီးက အသက် ကြီးပြီလေသားရဲ့... ဒါကြောင့် သေတာပေါ့ - ပြောတော့ - အသက်ကြီးရင် သေရောလား - ကျနော်က ထပ်မေး ပါတယ်။ မေးရင်း - ဒါဆို ဖိုးရော ဖွားရော အသက် ကြီးရင် သေမှာပေါ့နော် - ကျနော် ပြောတော့ - ဟယ်.. ဒီကောင်လေး ပေါက်ပါက်ရှာရှာ ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ - အဖိုးက ၀င်ဟန့် ပါတယ်။ - မူစိန်ကြီးကို သား ကိုင်ကြည့်တော့ သူ့ ခြေထောက်က အေးစက်နေတာပဲ - ကျနော် ပြောတော့ - အာ.. ဒီကောင် အလောင်းကို သွားကိုင် ခဲ့ပြန်ပြီ ဟုတ်လား ... - ပြောရင်း အဖိုးရဲ့ ဆေးတံကြီးက ဒေါင်ကနဲ ကျနော့် ခေါင်းပေါ် ကျလာပါတော့တယ်။ - နောက် လူသေ အလောင်းကို ဘယ်တော့ မှ မကိုင်ရဘူး ကြားလား... ကလေးက ကလေး ဘာသာ နေစမ်း - ဆိုတဲ့ အဖိုး စကား အဆုံးမှာတော့ ကျနော်လည်း လွတ်ရာ လွတ်ကြောင်း အိမ်ရှေ့ဖက် ပြေးထွက်ခဲ့ ပါတော့တယ်။ စိတ်ထဲ မှာတော့ - သေပြီ၊ အသက်ကြီးရင် သေရော၊ သေရင် ခေါ်မရတော့ဘူး - ဆိုတဲ့ စကားတွေက ပဲ့တင်သံလို တနေ့လုံး ခေါင်းထဲမှာ မြည်နေပါတော့တယ်။ နောက်တော့လည်း အဲတာတွေကို မေ့သွား ပါတော့တယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကတော့ ကျနော် ပဉ္စမတန်းတက်နေတုန်းကပါ။ ကျနော်က တောင်ဥက္ကလာပ အ.မ.က. (၁၃) ကနေ ရန်ကင်း အ.လ.က. (၄)ကို ပြောင်းတက်ရပါတယ်။ ကျောင်းဖွင့်ကာစ ဆိုတော့ မိုးတွင်းကြီးပါ။ ဇူလိုင်လကုန်လောက်မှာ ကျနော်တို့ အတန်းထဲက ကောင်မလေးတယောက် သွေးလွန် တုပ်ကွေး ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွား ပါတယ်။ မိုးတွေ ရွာနေတဲ့ ကြားထဲမှာ ကျနော်တို့ တတန်းလုံး အတန်းပိုင် ဆရာ ဦးလှမြင့် ဦးဆောင်ပြီး တာမွေ သင်္ချိုင်းကို သွားပြီး အဲသည် ကျောင်းသူလေးရဲ့ အသုဘကို လိုက်ပို့ရပါတယ်။ ကျနော့် ဘ၀မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် လိုက်ပို့ခဲ့ဖူးတဲ့ အသုဘ ဖြစ်သလို၊ သင်္ချိုင်းဆိုတာကိုလည်း ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ ဖူးခြင်း ပါပဲ။ ထို့အတူ လူသား တယောက်ရဲ့ လူ့လောကက ခွဲခွာရခြင်းအတွက် ကျန်ရစ်ခဲ့သူ တွေရဲ့ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲမှုနဲ့ ပရိဒေ၀ သောကတွေကို ပထမဆုံး အကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေးကို မြေမမြှုပ်ခင် အခေါင်းဖုံးကို ဖွင့်ပြတော့ ကျနော်တို့တွေ စပ်စုပြီး အတင်း တိုးဝှေ့ ကြည့်ကြ ပါတယ်။ ကောင်မလေးက မျက်စေ့မှိတ်လို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ပုံပါပဲ။ မျက်နှာကတော့ ဖြူဖတ် နေပါ တယ်။ နှာခေါင်းမှာလည်း သွေးစတွေ စွန်းနေတဲ့ ဂွမ်းစ ၂ ခုကို ထိုးထည့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ အမေက အခေါင်းမှာ မျက်နှာအပ်ပြီး အော်ငိုနေတာပါ။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ ကျနော်လည်း ငိုချင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ လူအုပ်ထဲက တိုးထွက်ပြီး ဆရာ့ အနားမှာ သွားရပ်နေမိတယ်။ နောက်တော့ ဆရာက ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး လက်မှတ်ထိုး ရေးပေးလိုက်တဲ့ အမိန့်စာကို ပြန်ပါတယ်။ - ဤကျောင်းနှင့် သင် မဆိုင်တော့၊ ယနေ့မှစ၍ သင်သွားလိုရာသို့ သွားနိုင်ပြီ- စသည်ဖြင့် ဆရာ အမိန့်စာ ပြန်နေတာကို ကြားနေရပါတယ်။ အဲသည်မှာ အဲကျောင်းသူနဲ့ ခုံတတန်းထဲ ထိုင်ကြတဲ့ ကောင်မလေး တချို့လည်း ငိုနေကြ ပါတယ်။ ကျောင်းကို ပြန်ရောက်တော့ ဆရာ လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ အားလုံး ကို အိပ်ခိုင်း ထားပါတယ်။ အဲသည်နေ့က စာ မသင်ပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ ဆရာဦးလှမြင့် ဖတ်ခဲ့တဲ့ အမိန့်စာ အကြောင်းကို တွေးနေမိပါတယ်။ ကျနော်နဲ့အတူ တခုံတည်းထိုင်ရတဲ့ ကျောင်းသား တယောက်က ကျနော့်ထက် ၄ နှစ်လောက် ကြီးပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်က သူ့ကို - အဲ ကောင်မလေးကို ဘာလို့ အမိန့်စာ ပြန်ရတာလဲ ဟင်... - မေးမိတော့ - မပြန်ရင် သူက ကျောင်းမှာ လာပြီး သရဲခြောက်နေမှာပေါ့... ဒါကြောင့် မောင်းထုတ်လိုက်တာ... - တဲ့။ - သေပြီးရင် အဲလိုပဲ မောင်းထုတ်ရလား။ သေပြီးရင် သရဲလာ ခြောက်သလား၊ သရဲခြောက်တော့ ဘာဖြစ်လဲ - ကျနော့် ဘာသာ တွေးနေမိတော့တာပါပဲ။ မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ အဲကောင်မလေးကိုလည်း စိတ်ထဲက သနားနေမိပါသေးတယ်။ အဲသည်နေ့ ကတော့ ကျောင်း မဆင်း မချင်း - အမိန့်စာ၊ သွားလိုရာ သွားနိုင်ပြီ၊ သရဲခြောက် - စတဲ့ စကားလုံးတွေက ကျနော့် ခေါင်းထဲ တ၀ဲလည်လည်ပါပဲ။ အဲဒါအပြင် - မူစိန်ကြီးလို အသက် မကြီးသေးပဲနဲ့ ဘာလို့ သည်ကောင်မလေးက သေသွားရတာလဲ - ဆိုတာ ကိုလည်း စဉ်းစားနေမိ ပါသေး တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းဆင်း တော့လည်း အားလုံးကို မေ့သွားတာပါပဲလေ။
တတိယအကြိမ် ကြုံရတာကတော့ ကျနော် ရှစ်တန်းနှစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ ခြံထဲမှာ ကျနော်တို့ ညီအကို နေတဲ့ တဲတလုံး ရှိပါတယ်။ တဲနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းတဖက်ရဲ့ လမ်းဘေး ကပ်လျက်မှာ ထန်းပင် တပင်ရှိပါတယ်။ အသက် ၄၀ လောက် ရှိတဲ့ လူကြီးတယောက် နေ့တိုင်း ထန်းတက်လေ့ ရှိပါတယ်။ တခါတလေ ကျနော်တို့ ကျောင်းပိတ်တဲ့ ရက်တွေဆို သည်လူကြီး ထန်းတက်တာ၊ ၀ါးကျည်တောက်တွေနဲ့ ဆင်းလာတာကို ကျနော်တို့ တဲရဲ့ ပြတင်းပေါက်ကနေ တွေ့ရတတ် ပါတယ်။ တညနေ ကျနော်တို့ ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ထန်းပင်ရင်းမှာ လူတွေ အုံနေတာနဲ့ ညီအကို ၂ ယောက် သွား ကြည့်ကြပါတယ်။ အဖေနဲ့ ကျနော်တို့ ခြံထဲမှာ အဆောက်အဦး ပြင်ဆောက်နေတဲ့ လက်သမား ဆရာကြီး အဘဦးလှကြူ ကိုပါ လူတွေ ကြားထဲ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ - ဘာဖြစ်တာလဲ အဖေ - မေးရင်းနဲ့ ထန်းပင်ရင်းမှာ တောင်ထန်း အရွက်တွေနဲ့ အုပ်ထားတဲ့ ထန်းတက်သမားကြီးရဲ့ အလောင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ထန်း တက်ရင်း ထန်းပင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာပါ။ ဇက်ကျိုးပြီး လည်ပင်းလိမ် နေတာကိုပါ တွေ့ရပါတယ်။ သွေးတွေလည်း အိုင်နေ တာပါပဲ။ - ရဲကို အကြောင်းကြား ထားတယ် - ရပ်ကွက် လူကြီးတယောက် ပြောတာကို ကြားရပါတယ်။ ဒါပေသည့် နောက်နေ့ မနက် ကျနော် တို့ ကျောင်းသွားတဲ့ အထိ ဘယ်ရဲ တယောက်မှ မလာပါ။ ဘယ်သူ မှလည်း အလောင်းကို လာမကောက်ကြသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ ကျောင်းက ပြန်လာတော့ ထန်းတက် သမားကြီးရဲ့ ညီနဲ့ ရဲတွေ ညနေဖက်ကျမှ အလောင်း လာယူ သွားတယ် ပြောပါတယ်။ သည့်နောက် မှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကျနော်တို့ အိမ်ရှေ့က လမ်းက သူရဲ အရမ်း ခြောက် သတဲ့။ အဲလမ်းက ဖြတ်သွားရင် ထန်းပင် ပေါ်ကနေ မဲမဲ မဲမဲနဲ့ ဆင်းလိုက် သတဲ့။ တခါတလေ သရဲက ဆင်း မလိုက် ချင်ရင်လည်း ထန်းပင်ပေါ်ကနေ သဲတွေ ဖြူးချသတဲ့ဗျား။ နံမည် ကြီးနေလိုက်ပုံများ။ ကျနော်တို့ ညီအကို ၂ ယောက်ကတော့ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေ ပြောနေတဲ့ သရဲကို တခါမှကို မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျနော်တို့က ထန်းပင်နဲ့ ကပ်လျက် နေနေတာ ဆိုတော့ သရဲနဲ့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်နေလို့ မခြောက်တာလဲ ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ညနေဖက် ထမင်းဝိုင်း မှာတော့ အဖေက - သည်လူကွာ အဲနေ့က သူနေမကောင်းဘူး။ ခေါင်းကိုက်နေတယ်တောင် ဦးလေး ဦးလှကြူနဲ့ ငါ့ကို ပြောနေသေးတာ။ ငါတို့ ခေါင်တိုင် ထူနေတုန်း ဘုန်း...ဆို အသံကြီး ကြားရတာ။ ဦးလေးက လူ ပြုတ်ကျတယ်... လူပြုတ်ကျတယ် ... အော်ပြီး ပြေးသွား တာ။ ငါတို့ရောက်တော့ အသက် မရှိတော့ဘူး။ ပွဲချင်းပြီးပဲ။ ဇက်ကျိုး သွားတာ။ မူးပြီး ပြုတ်ကျတာပဲ ဖြစ်မှာ - ပြောနေတော့ ကျနော်လည်း ထမင်း စားနေရင်းနဲ့ - သည်လူကြီး နေမကောင်းရင်လည်း ထန်း မတက်နဲ့ ပေါ့။ တရက် မတက်ရင် ဘာ ဖြစ်မှာလဲ။ ခုတော့ မူးပြီး ကျသေတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်ရော။ သူသာ အဲနေ့က မတက်ရင် သေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အို... သူ့မှာလည်း တရက် မတက်ရင် မိသားစုအတွက် တရက်စာ ငွေ မရရင် မဖြစ်လို့ မတက်ချင် တက်ချင်နဲ့ တက်ရတာ ဖြစ်မှာပေါ့ ... - စသည်ဖြင့် လျှောက် တွေးနေမိ ပါတော့တယ်။ ဆက်တွေးမိတာကတော့ သည် ထန်းတက်သမားကြီးရဲ့ အဖြစ် အပျက် ကနေ တဆင့် သေခြင်း တရားကို ရှောင်လို့ ရသလား မရဘူးလား အထိပါ တွေးမိတော့တာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစု အတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး ရှာဖွေ ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ လူတယောက်ကတော့ သူ့ လမ်းဆုံးကို စောစော စီးစီး ရောက်သွားတော့တာပါပဲလေ။ ကျနော့် တသက်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားမိတာ ကတော့ သေခြင်း တရားဆိုတာ အသက်ကြီးမှ မဟုတ်ပဲ ကြီးငယ်မရွေး အချိန် ကာလ မရွေး ရောက်လာတာ ပါလား ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
စတုတ္ထအကြိမ် ကြုံရတာကတော့ ကျနော် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တက်နေတဲ့ အချိန်မှာပါ။ သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ အဖေက လေယာဉ်စက်ပြင်ဆရာပါ။ တခါတလေ သူငယ်ချင်း အိမ်ကို သွားရင် အဲ ဦးလေးကို အိမ်ဦးခန်းမှာ သတင်းစာဖြစ်ဖြစ် စာအုပ် တအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်နေတတ်တာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသားဖြူဖြူ ချောချောနဲ့ ကြည့်ကောင်းတဲ့ လူကြီးတဦးပါ။ ကျနော်တို့ကိုလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံလေ့ ရှိပါတယ်။ တရက်မှာ လေယာဉ် စက်ပြင်ဖို့ အဲဦးလေး မြစ်ကြီးနားကို လိုက်သွားရပါတယ်။ နောက်တော့ အဲသည်မှာပဲ နမိုးနီးယားနဲ့ ဆုံးတယ် ဆိုတာ ကြားရတာပါ။ နောက်တော့ သူ့အလောင်းကို ရန်ကုန် ပြန်သယ် လာတယ်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ အိမ်မှာ သွားပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တာတွေ ကူညီ ပေးကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ကတော့ အဖေသေတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပုံ တစက်မှ မပြပါဘူး။ ဟီးဟီး ဟားဟားနဲ့ ပျော်နေပါသေးတယ်။ ဖဲဝိုင်းမှာ ပျော်ပျော် ပါးပါးကြီးကို အကောက်တွေ ကောက်လို့။ ကျနော်တို့ နားမလည်ပါ။ နောက်တော့ သူက ပြောပါတယ် - ငါ့အဖေက မြစ်ကြီးနားမှာ မယားငယ်ရှိတယ်ကွ - တဲ့။ အသုဘချတဲ့ နေ့မှာ သူ့ အမေက စလို့ ဘယ်သူမှ မငိုကြပါ။ ကျနော့် အတွက်တော့ အထူး အဆန်းပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ သူတို့ မိသားစု အရေးကိစ္စ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေက ဘာမှ စပ်စု မေးမြန်းတာ မလုပ်ကြပေမယ့် ကျနော့် အတွက်တော့ - လူတယောက် လမ်းဆုံးကို ရောက်သွားတဲ့အတွက် ၀မ်းမနည်းတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတတ်ပါလား - လို့ စဉ်းစားမိ သွားပါတယ်။ ထို့အတူ - လမ်းဆုံးကို ရောက်သွားသူတယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ရှင်သန်မှုကို လိုက်လို့ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲမယ့်သူ မရှိတာကိုလည်း ကြုံရမှာပဲ- လို့ တွေးမိသွားပါသေးတယ်။
at 4:36 PM 23 comments:
at 7:13 PM 79 comments:
မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် (၄၅) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက်
ကျနော့်ရဲ့ ပြက္ခဒိန်တချို့ကို မှင်တို့ထားကြည့်တာပါ -
ကျနော် ကြီးပျင်းခဲ့... ။
ပြပွဲတွေ ကြည့်ခဲ့ ...
အမေ လဲလှယ် ပေးထားလို့
အမေ့ကဗျာ သံတိုင်တွေကြားထဲ လန်းဆန်းလို့...
လရောင် မှုန်မွှားထဲ အေးချမ်းလို့...
သေကောင်ပေါင်းလဲ ကျနော် ရွတ်အံ
အမေ အိမ်ပြန်လာတဲ့ တနေ့မှာ
ကျနော် ခဏ ဖြစ်သွားသေးတယ်။
ကျနော့်ကို ထွေးထားပေးပါ မေမေ
ဖေဖေ ဘယ်မလဲ- မေးတဲ့အခါ
အမေ ပြောတယ် -အဝေးကြီးမှာ- တဲ့
ခဏလောက် မေမေ ရပ်ကြည့်နေသေးတယ်။
ကျနော့်ကိုလည်း ပေးကြည့်ပါ မေမေ
ဒါပေမယ့် “Tanguy”ရဲ့ ပန်းချီကား
ဖေဖေ ဒဏ်ရာတွေ ရထားတယ်”
ကျနော် တကယ် သိသွားပါပြီ...
အဖေ ခဏ ငှားခဲ့တယ်။
ကျောင်းတွေ ပိတ်လို့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ မြို့မှာ
ကျနော့်အတွက် အမေ ခေါ်လာခဲ့တယ်။
သူ့ကို ကျနော် သိပ်ခဲ့ရတာပေါ့။
ဂစ်တာတီးတဲ့ ညတွေ များများလာ...
နှင်းဆီရနံ့၊ သက်တန့်၊ အပြုံး
အိပ်မက်တွေကို ဖုံးရင်း ...
ကြယ်တွေ စုံ ည
အစိမ်းနု တောင်ပံ ခတ်
နှင်းဆီ နီနီ ပွင့်ချပ်
ကံကြမ္မာ ချော်လဲခဲ့တဲ့ လမ်းတလျှောက်
တိတ်တဆိတ် မြင်မြင်မိ ... ။
ငါ့ကို ပြန်ပေးပါ့... ။
“Chagall”ရဲ့ “စစ်ပွဲ”မှာ လူးလိမ့်ရင်း...
ဒဏ်ရာတွေ ပြည့်နေပုံ ...
အေကေ တလက် ခေါင်းအုံး
“Dali”လို တိတ်တဆိတ် ကြည့်နေခဲ့ ...
ပျားရည် ၀ိုင်ချို၊ ရင်ဖို အနမ်း
မနေ့ကို မျိုးစေ့ကျဲပစ်မှ ဖြစ်မယ်။
နေတလုံး လတမင်း ကြယ်တစင်းနဲ့
၄၅ နှစ်မြောက် နွေဦးမှာ
(Photo sources: http://images.google.com; http://www.abcgallery.com)
at 9:47 PM 38 comments: